Kyaw Zay Ya » Tag » Photography
Kyaw Zay Ya Random Of My Life Tag Archive: Photography	April 27th, 2013
Tweet This Post London, Photography, street photography Black & White Photography , London , Photography , Songkrang , winbledon March 31st, 2013
0 London underground ညနေပိုင်းမှ ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်လို့ စိတ်ကူးပေါက်လို့ ထထွက်သွားလိုက်တယ်။ အပြင်ရောက်တော့ တော်တော် မှောင်နေပြီ။ ဘာရိုက်လို့ ရိုက်ရမယ်မှန်း မသိဘူး အဲဒါနဲ့ မထူးဘူး ဆိုပြီး tube ကို ဟိုဘက် လိုက်စီး ဒီဘက်လိုက်စီး အစအဆုံး လိုက်စီးပြီးတော့ ပုံတွေ လိုက်ရိုက်ဖြစ်တယ်..။ ဘာပုံ မှလည်း ကောင်းကောင်း ကန်းကန်း မရပါဘူး..။ ရိုက်ချင်စိတ် ပေါ်လာလို့သာ စိတ်ကျေနပ်အောင် အာသာပြေ လိုက်ရိုက် ပစ်လိုက်တယ်..။
Tweet This Post London London , people , Photography , street photography March 14th, 2013
0 street photo ကျနော် street photo တွေ ရိုက်တာ မကြာသေးပါဘူး..။ နောက်ပိုင်း သွားရင်း လာရင်း အမြဲလိုလို ကင်မရာ ယူသွား ဖြစ်တော့ လမ်းပေါ်က ဘဝတွေ ကို မှတ်တမ်း တင်မိတယ် ဆိုကြပါတော့ဗျာ..။
Tweet This Post London, Photography, street photography Black & White Photography , London , Photography , street photography , waterloo bridge March 4th, 2013
0 Bushy Park, London ဒီနေ့ လန်ဒန်က ဘေးမဲ့ ပန်းခြံတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Bushy Park ဘက်ကို သွားပြီးတော့ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ဖြစ်တယ်..။ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ဆို ကင်မရာ မကိုင်ဖြစ်တာ လနဲ့ချီပြီးကြာနေပြီဆိုတော့ ကင်မရာ ပြန်ကိုင်ရတာ…စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးပဲ ပျော်သလိုလို..။ ဝမ်းနည်းသလိုလို..:P လန်ဒန်မြို့ပေါ်မှာ ဒီလိုမျိုး ဘေးမဲ့တော တွေတော်တော်များများ ရှိသဗျ..။ သမင်တွေနဲ့ ငှက်မျိုးစုံကို သဘာဝအတိုင်း ဘေးမဲ့ လွှတ်ထားတာ သိပ်သဘောကျဖို့ ကောင်းတယ်..။
စကားမစပ် ဒီပုံလေးကို အကြည့်လို့ အမည် ပေးထားပါတယ်..။ ပုံထဲက လူက သမင်ကိုကြည့်နေတယ်..။ သမင်က ကျနော့်ကို ပြန်ကြည့်တဲ့ အချိန်လေးမှာ shutter release ကို နှိပ်မိသွားတဲ့ အခိုက်အတန့်လေး တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါနဲ့ စကားမစပ်ဗျာ သမင်နဲ့ ဂျီနဲ့ ဘာကွာသလဲဗျ…??
သမင်ကိုရိုက်တာ focus က ဘယ့်နှယ်လုပ် လူပေါ်မှာ သွားဖြတ်ရတာလဲ မသိပါဘူး ဒိုင်ယာနာ ဆိုတဲ့ တော်ဝင် မင်းသမီး တစ်ပါးကို ဘယ်အရာ တွေကများ ကံဆိုးစေခဲ့သလဲ??? ဘဝ နေဝင်ချိန်ဟာ မလှပခဲ့သလို အမှတ်တရ ပြုလုပ်ထားတဲ့ သူမရဲ့ ရုပ်ထု ဟာလည်း ရေပတ်လည် ဝိုင်းအောင် လုပ်ထားပြီး အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ ပြည်နှက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဖော်ညွှန်းချင်တာများလားလို့ တွေးနေမိတယ်..။
Tweet This Post Photography bushy park , Diana fountain , London , Photography , wild life Older Entries May 2013